Arsenal Oo Dhamaystirtay Heshiiskii U Horreeyey, Real Oo War Fiican Heshay, United Oo Dagaal Ku Bilowday Iyo Wararkii U Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaaraha - Gool24.Net
Arsenal Oo Dhamaystirtay Heshiiskii U Horreeyey, Real Oo War Fiican Heshay, United Oo Dagaal Ku Bilowday Iyo Wararkii U Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaaraha
May 30, 2020 Mahamoud Batalaale
Suuqa iibka ciyaartoyga caalamka ayaa wali xidhan, waxaana la filayaa inuu dib uga dhaco waqtigii uu rasmi ahaan u furmi lahaa, sababtoo ah, horyaallada Yurub ayaa dib ugu dhacay caabuqa, laakiin Premier League, LaLiga iyo Serie A ee loo muddeeyey inay bisha June badhtamaheeda bilaabmaan, ayaa keeni doona in isla marka ay dhamaadaan lagu dhawaaqo in suuqu furan yahay.
Inkasta oo uu suuqu xidhan yahay, haddana waxa jira dhaqdhaaqyo ay kooxaha waaweyn samaynayaan oo ay kusoo jiidanayaan laacibiinta ay doonayaan inay u dhaqaaqaan marka uu suuqu furmo, kuwaas oo ay ku jiraan ciyaartooyo bilaash ay ku heli karayaan oo qandaraasyadoodu dhamaad yihiin iyo kuwo ay lacago badan kaga xidhan yihiin.
Sidii aad horeba nooga barateen, waxa aanu si joogto ah akhristeyaasha nagu xidhan ugu soo gudbinaa dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey ee kooxuhu suuqa ka sameeyeen iyo wararka hoose ee xanta ah ee ay soo bandhigaan wargeysyada waaweyn ee Yurub.
Haddaba waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey ee maanta oo Sabti ah ay qoreen wargeysyada waaweyn ee Yurub:
Bayern Munich ayaa u bandhigtay Manchester City inay qaadato difaaceeda 24 jirka ah ee u dhashay Faransiiska ee Lucas Hernandez si uu qayb uga noqdo heshiiska garabka weerarka Jarmalka ah ee Leroy Sane. (TZ)
Weeraryahanka reer Argentine ee Mauro Icardi oo 27 jir ah, ayaa heshiis rasmi ah ugu biiraya Paris St-Germain oo bixin doonta £51.2 milyan oo ay Inter Milan ku heshiiyeen. Waxa uu hore ugu joogay PSG heshiis amaah ah. (Sky Sports)
Kabtankii hore ee Manchester City ee Vincent Kompany oo 34 jir ah, waxa uu iska diiday fursad uu ugu laaban lahaa kooxdiisa hore oo uu gacan-yare ugu noqonayay Pep Guardiola inyar kaddib markii uu ka tegay kooxda ee uu ciyaartoy-tababare u noqday Anderletcht. (Sun)
Tabababaraha Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer waxa uu rajaynayaa inuu iska diro 31 jirka weerarka ee reer Chile ee Alexis Sanchez xagaagan oo la filayo in Inter Milan ay heshiiska amaahda u kordhiso. (Express)
AC Milan ayaa muujinaysa xiise ay kula saxeexanayso laacibka khadka dhexe uga ciyaara Burnley iyo xulka Republic of Ireland ee Jeff Hendrick oo ah 28 jir si xor noqonaya xagaagan. (Sky Sports)
Wakiilka difaaca midig ee Borussia Dortmund ee Achraf Hakimi oo ah 21 jir amaah kaga maqan Real Madrid, ayaa sheegay in kooxda reer Spain ee Los Blancos ay tahay muhiimadda ciyaartoyga, laakiin wuxuu ku andacooday in aanu laacibka reer Morocco u degdegsanayn ku laabashada Santiago Bernabeu. (Evening Standard)
Leicester City ayaa caddaysay damaceeda difaaca 22 jirka ah ee Celtic iyo xulka Norway ee Kristoffer Ajer. (Nicolo Schira)
Tababaraha BIrmingham City ee Pep Clotet ayaa rajaynaya in dareen gaar ah loo yeelan doono da’yarka khadka dhexe ee Jude Bellingham haddii uu dib usoo laabto horyaalka Championship-ku, waxaana xiisaynaya kooxo ay ka mid yihiin Manchester United iyo Borussia Dortmund 16 jirkan. (Sky Sports)
Arsenal waxay dhamaystirtay heshiis ay la gaadhay laacibka garabka ka ciyaara ee u dhashay waddanka Rwanda ee George Lewis oo ah 19 jir sharcigu u ogol yahay inuu u ciyaaro Norway. (VG)
Arsenal waxa kale oo ay soo cusboonaysiisay xiisihii ay u qabtay weeraryahanka Lyon iyo xulka France ee Moussa Dembele oo ah 23 jir ay wakiilkiisa xidhiidh la yeesheen. (L’Equipe)
Manchester United ayaa dardar gelin doonta xiisaha ay u qabto weeraryahanka Lyon oo la filayo in qiimihiisu hoos u dhici doono. (Daily Star)